Ahoana ny fomba hanampiana sonia ao amin'ny Gmail ho an'ny Android amin'ny mailaka | Androidsis
Ahoana ny fomba hanampiana sonia ny mailakao amin'ny Gmail for Android
Gmail dia fampiharana tena ilaina amin'ny finday Android, izay ampiasainay isan'andro. Ho an'ny mpampiasa maro dia zava-dehibe kokoa noho izy ireo mampiasa azy io amin'ny asa, na amin'ny findainy ihany koa. Noho izany, amin'ny anao dia misy fiasa sasany ao amin'ny fampiharana izay manan-danja, ahoana ny fandaharam-potoana amin'ny fandefasana ny mailaka na ny valiny mandeha ho azy mitovy amin'izany.
Fiasa iray izay mahaliana ny mpampiasa mampiasa Gmail amin'ny Android ihany koa dia ny fananana sonia amin'ireo mailaka alefany. Ity sonia ity dia azo noforonina tamin'ny telefaona. Ka raha mieritreritra ny hanisy sonia ny mailakao amin'ny findainao ianao dia azo atao izany.
Ny sonia amin'ny mailaka fampiharana dia tena mahazatra. Na izany aza matetika mamorona iray avy amin'ny solosaina isika. Fa omena antsika ihany koa ny mety hamoronana sonia amin'ny fitaovana, mba hanananay sonia tsotra sy fohy kokoa, izay haseho amin'ireo mailaka alefanay amin'ny alàlan'ny finday Android. Ity dia dingana iray tena tsotra manaraka.
1 Mamorona sonia ao amin'ny Gmail ho an'ny Android
2 Fahasamihafana amin'ny sonia mahazatra
Mamorona sonia ao amin'ny Gmail ho an'ny Android
Voalohany indrindra dia tsy maintsy ataontsika izany sokafy ny telefaona Gmail ho an'ny Android amin'ny telefaona. Ao anatin'ny fampiharana dia tsy maintsy asehontsika ny menio sisiny, izay ahitantsika andiana safidy misy. Mila mizotra mankany amin'ny faran'ny menio lafiny voalaza isika, izay hahitantsika ny safidin'ny Settings. Ao amin'ity safidy ity no tokony hidirantsika amin'ity tranga ity.
Ao amin'ireo sehatra no ahitantsika safidy telo. Tsy maintsy tsindrio ny kaonty mailaka izay hidirantsika hoy ny sonia tao amin'ny mailaka anay. Raha manana kaonty maromaro mifandraika amin'ny fampiharana ianao dia tsy maintsy misafidy ilay iray izay tianao hampiasa sonia izao. Tsindrio ny kaonty voalaza dia hisokatra ny menio fanovana, izay ahitantsika andiana fizarana samihafa.
Amin'ity menio ity dia mila mihetsika kely isika, mandra-pahatongantsika any amin'ilay faritra fanaovana sonia. Rehefa manindry azy ianao dia misy varavarankely vaovao misokatra eo amin'ny efijery, izay hahafahantsika apetraho ny sonia tianay hampiasaina amin'ny Gmail for Android. Tsy toy ny sonia amin'ny solosaina fa misy fetrany bebe kokoa. Ny hevitra dia ny fampiasantsika sonia fohy amin'ity tranga ity, izay ahafahantsika manamboatra araka izay tiantsika amin'ity lafiny ity. Rehefa tafiditra io sonia io dia afaka mikitika isika raha tehirizina ary efa napetraka ho an'ny mailaka alefantsika avy amin'ny Android ity sonia ity.
Inona no hatao raha tsy mandefa fampandrenesana amin'ny Android ny Gmail
Fahasamihafana amin'ny sonia mahazatra
Raha namorona sonia ny kaonty Gmail-nao taloha ianao dia ho hitanao izany misy tsy fitoviana amin'io lafiny io. Ny sonia azontsika atao amin'ny Android dia tsotra sy fohy kokoa. Koa satria ao amin'ny solosaina dia manana mpampanonta lahatsoratra kely ahafahana mamorona sonia voalaza isika, mamela azy io ho lava kokoa, ankoatry ny fahafahantsika misafidy ny endri-tsoratra, ny habeny na raha te hampiasa sora-mandry na sahisahy aza isika. Ka ity iray ity dia manana fetrany mazava.
Etsy ankilany, amin'ny sonia ao amin'ny solosaina dia azontsika atao ny manampy sary. Betsaka ny olona manampy ny sariny manokana, na ny logo an'ny orinasa amin'ity sonia ity. Mampalahelo fa amin'ny tranga Gmail amin'ny Android dia tsy azo atao izany. Ny sonia izay tsy maintsy ampianay amin'ity tranga ity dia tsy misy afa-tsy ny lahatsoratra ihany. Ka tsy ho feno araka izay ilain'ny mpampiasa sy tadiaviny izany, fa farafaharatsiny afaka manana sonia amin'ireo mailaka alefa amin'ny telefaona isika.
Toy ny amin'ny kinova mahazatra, afaka manova an'ity sonia ity isika isaky ny maniry, na esory tanteraka. Hiavaka ny sonia arakaraka ny mailaka alefanay. Raha nalefa tamin'ny solosaina io dia hahita sonia hafa ilay olona raha tsy hoe mandefa mailaka avy amin'ny Android izahay. Na dia tsy tokony ho fanelingelenana na olana ho an'ity olona ity aza izany. Efa nampiasa an'io sonia io ao amin'ny Gmail ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android cheat » Ahoana ny fomba hanampiana sonia ny mailakao amin'ny Gmail for Android
Ahoana ny fomba handefasana hafatra tsy misy feo amin'ny Telegram